Iimfihlakalo eziqaqambileyo zeRosari eNgcwele Discover Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kule nqaku siza kukuxelela ngakumbi malunga Iimfihlakalo eziqaqambileyo del irosari engcwele. Irosari kukhunjulwa iimfihlakalo ezingamashumi amabini kwaye uthotho ngalunye lubandakanya imixholo emihlanu echaza ubomi bukaYesu neNtombikazi enguMariya.
1 Iimfihlakalo eziqaqambileyo, ubomi babudala bukaYesu
1.1 Elona xesha libalulekileyo leemfihlakalo ezikhanyayo
1.1.1 Ubhaptizo eYordan
1.1.2 Umtshato eKana
1.1.3 Isibhengezo soBukumkani bukaThixo
1.1.4 Ukwenziwa kumila kumbi
1.1.5 Iziko le-Ekaristi
2 Ukubaluleka kokwazi iimfihlakalo zeRosari eNgcwele
Iimfihlakalo eziqaqambileyo, ubomi babudala bukaYesu
Kwimvelaphi yeRosari eNgcwele, isuka kwiinkulungwane ze-XNUMX, njengoko ubona indlela amasiko amandulo emithandazo afunyanwa eMpuma naseNtshona ahlangana ngayo, ngenxa yesi sizathu, i-rosari iyaziwa ngokudumisa Ukuphindaphinda okubonakala kwincwadi yeVangeli kaLuka.
IRosari eNgcwele isetyenziselwa ukunxibelelana ngamandla noYesu kunye neNtombi enguMariya ngokucamngca, kuba irosari yenziwe ngemixholo emihlanu eyahlukeneyo emele ubomi bukaYesu neNtombi enguMariya, ngokwesiko, irosari yanikezelwa kwelinye lala manqaku mathathu Iimfihlakalo eziza kulandelwa ngokulandelelana, enye kubusuku ngabunye.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuthandaza i-rosari, kuba iyahluka ngokwendlela yokucamngca, imithandazo eyongeziweyo kunye nenkuthazo efanayo naleyo umntu ayenzayo ngexesha lokuyenza, yonke into inefuthe, kwaye ke kukho, ukongeza irosari yobuvangeli, irosari yabafi, ubomi okanye iintsapho.
Imithandazo yerosari iguqukile njengoko ixesha lihamba, umzekelo, ayifani nokugcina umthandazo njengoko wawunjalo kwiminyaka eyi-1200 eyadlulayo, kodwa usafuna ukugcina isithethe siphila ngokungalahleki esi sixhobo sokunxibelelana Nkosi ukusukela isiphelo sinye. Ilizwe ngalinye kunye nenkcubeko nganye yamkele umthandazo owahluke ngokupheleleyo, kunye ne irosari yenceba kaThixo isetyenziswa kakhulu kwiLatin America.
Ngesi sizathu kufuneka sazi kancinci malunga neemfihlakalo ezibandakanya nganye, kuba ukufunda kubomi bukaYesu kuyasinceda ukuba sinxibelelane ngakumbi nobuntu bethu bangaphakathi kunye namandla asikhuselayo abasinika wona. Iimfihlakalo ezikhanyayo ezaziwa ngokuba ziimfihlelo zokukhanya, zezesine kweemfihlelo ezintlanu ezibaluleke kakhulu.
Elona xesha libalulekileyo leemfihlakalo ezikhanyayo
Imfihlelo nganye ibonakalisile kwimbali yoBukumkani bukaYesu Krestu, kuba yonke imfihlakalo ilula, iimfihlakalo ezikhanyayo zishunyayelwa ngolwezine kuphela. Ezi mfihlakalo ziyakwazi ukubuyisela ezona zithuba zibalulekileyo nezona zibalulekileyo ebomini beNkosi yethu.
Imfihlelo yesithathu ebaluleke kakhulu yile yeemfihlakalo ezikhanyayo, kuba xa sisazi ngobomi bukaYesu siyaqaphela ukuba emva kweemfihlakalo zovuyo, esizaziyo njengemizuzu yokuqala yeNkosi yethu ukusukela kwisibhengezo sayo kubuntwana bayo, sifumana nathi ngokwethu sinokuba bubomi basesidlangalaleni bukaKristu kuba sithetha ngenxalenye esisiseko apho ubhaptizo kunye nokwenziwa kumila kumbi kukaYesu kwenzeka khona.
Ezi mfihlakalo zinxulunyaniswe nomgaqo onceda ukuqonda umzuzu ngamnye, ke siza kuchaza ngakumbi malunga nenye yezi zinto zakha le mfihlakalo yokuKhanya.
Ukubhaptizwa kweNkosi yayilelinye lawona maxesha atyhila kakhulu kuba ichaza indlela uYesu awabona ngayo izulu livuleka kwaye wangqina ngqo phambi kwamehlo akhe uThixo esihla njengehobe ukumxelela ukuba ngunyana wakhe amthandayo nalowo amkhethileyo.
Kule ndawo kubaliswa ngendlela uMariya awabaxelela ngayo abo babemkhonza ukuba benze le nto athi mabayenze ukuze bandise iwayini. Ndiyakumema ukuba ufunde: "IRosari kwiNtombi Enyulu".
Isibhengezo soBukumkani bukaThixo
Apha sithetha ngoYesu ngokuya ngqo eGalili apho wayeza kuba nakho ukubhengeza iindaba ezilungileyo awayezinikwe nguThixo.
Ukwenziwa kumila kumbi
Apha ke usixelela ukuba ngelixa wayethandaza kwaye eshumayela ilizwi lakhe, bobabini ubuso bakhe kunye nempahla awayeyinxibile yajika yaba lilizwi elimhlophe, elimhlophe qwa nelikhanyayo.
Enye yezona meko zibalulekileyo nezifanelekileyo kuyo yonke imbali yile siyazi njengeSidlo Sangokuhlwa Sokugqibela, apho uYesu wayethathe isonka ezandleni zakhe wabulela kuThixo ngokusasaza kubo bonke aBafundi bakhe ukuze batye emzimbeni wakhe.
Ukubaluleka kokwazi iimfihlakalo zeRosari eNgcwele
Xa sithetha ngokwazi imithandazo okanye imithandazo esiyifumana ngaphakathi kwiRosari eNgcwele, sithetha ukuba siza kuchitha umzuzu wokugxininisa kakhulu ekucamngceni ukuze sikwazi ukufikelela kunxibelelwano olunamandla, oluya kukunceda ukuba uzole. Ngesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukuba sazi ngokuchanekileyo ukuba ngamnye ufuna ukuthini, kwaye wazi loo myalezo unzulu owawufunelwa ukuba ubalaseliswe kwiVangeli.
Icawa yamaKatolika iyangqina ukuba iyakholelwa ukuba uMama kaThixo osikelelweyo uzakusebenzisa ukhuseleko olupheleleyo kuthi njengowesifazane ongumama wabo bonke, ke ngoko sibeka lo mzuzu wokuzinikela ngokupheleleyo kuye ukuze athabathe lonke ixhala lethu. Ngokunjalo, uthotho ngalunye lweRosari eNgcwele luqulathe izihloko ezintlanu esiza kufunda ngakumbi ngazo ngamanqanaba kaYesu Krestu kunye neNtombi Enyulu uMariya.
Xa ubhekisa kwimithandazo egcinwe ngaphakathi kwiRosari, kukuthetha ngezibonelelo ezizisiweyo, kukuthetha ngamandla alo obabalo asikhokelayo kwindlela yokuphilisa intliziyo. Kananjalo, samkela njani ubuthixo bukaYesu ukuzalisekisa ezo njongo zobomi esizifunayo.
Irosari izinikele ngokukodwa ekuqaqambiseni isimilo kunye nokubandakanywa kokuxabisa kunye nokucinga ngokuchazwa esidlangalaleni okwenziwa nguKrestu ebomini, kuba ezi zinto zinokubaluleka kwaye zityhile, kuba oku siyazazi ezi mfihlakalo zibalaseleyo:
Ngovuyo, apha sifumana izihloko ezinje ngesibhengezo sokufika kweNkosi yethu, utyelelo lukaMariya e-Saint Elizabeth, ukuzalwa kukaYesu, ukuziswa kukaYesu Krestu etempileni.
Kubuhlungu, kuthetha ngokutyakatywa kukaYesu, isithsaba ngameva, ukubethelelwa emnqamlezweni ukufa yeNkosi.
Ukukhanya, ukwenziwa kumila kumbi kweNkosi yethu
Luzukile, luvuko lweNkosi, ukunyukela kweNkosi, ukuthweswa isithsaba sentombi.